မုန်တိုင်းလွန်ကာလ « MMWeather Information BLOG
« Newer Entries တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် မုန်တိုင်း KAITAK(14W) ဟောင်ကောင်အနီးမှ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည်
By mmweather.ygn, on August 15th, 2012%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အပူပိုင်း မုန်တိုင်း KAI-TAK(ဖိလစ်ပိုင်အမည် HELEN)သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ပြီးနောက် တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိကာ အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပါသည်။
မုန်တိုင်း KAI-TAK လာမည့် ၁၂ နာရီအတွင်း(မြန်မာစံတော်ချိန် သြဂုတ်လ ၁၆ ရက် နံနက် ၀၀၃၀ နာရီ) တွင် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ ၂၄ နာရီ နောက်ပိုင်း(သြဂုတ်လ ၁၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်ပြည် တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား၊ Guangdong(ဂွမ်ဒုံးပြည်နယ်) ဟောင်ကောင်မြို့ အနီးမှ ကုန်းတွင်းကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် Guangxi ပြည်နယ်နှင့် Yunnan ပြည်နယ် နယ်စပ်အနီးတွင် လာမည့် . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် မုန်တိုင်း KAITAK(14W) ဟောင်ကောင်အနီးမှ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည်
3 comments Uncategorized တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HAIKUI အကြွင်းအကျန် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ
Leaveacomment Uncategorized မိုးများနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထပ်မံ ရွေ့လျားလာဘွယ်ရှိသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန်များ
One comment Uncategorized « Newer Entries Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum